Seddexda Waxyaabood ee ugu Sareeya oo laga Ogaado COVID-19 Tallaalada loogu tala galay Da'da Yar - Websaydhka rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Seddexda Waxyaabood ee Ugu Waa Weyn ee laga Baran karo ee ku saabsan COVID-19 Tallaalada loogu tala galay da ’yarta
Talaalada | 18-kii Maajo, 2021
Waqtiga Akhrinta: 2 Daqiiqad / s
Jawaabaha ku saabsan tallaalka Pfizer-BioNTech hadda wuxuu diyaar u yahay 12+
Hadda oo Maamulka Cuntada iyo Dawada ay cadeeyeen talaalkii ugu horeeyay ee coronavirus ee loogu talagalay isticmaalka degdega ah ee caruurta da'doodu tahay 12 sano, qoysaska waxaa hubaal ah inay qabaan su'aalo ku saabsan tallaalka Pfizer-BioNTech iyo goorta la heli doono. Waxaan lahadalnay Madaxayaga Caafimaadka Dr. Paul Sherman.
Talaalku ma loo oggol yahay isticmaal la mid ah kan la siiyay malaayiin qof oo 16 jir ah ama ka weyn?
Haa. Waa isku tallaal, isku awood, waxayna u baahan tahay laba qiyaasood.
Maxkamad ka badan 2000 dhalinyaro, ma jirin kiisaska COVID ee kaqeybgalayaasha talaalka halka 16 ka mid ah kooxda placebo (aan la tallaalin) ay heleen COVID. Kuwa kale ee talaalka sameeya waxay ku dhexjiraan tijaabooyin rajo leh oo kooxdan ah, laakiin hada Pfizer waa kan kaliya ee loo ogolaaday in loo isticmaalo kooxdan da 'yarta ah.
Maxay ahaayeen dhibaatooyinka soo raaca?
Saameynaha ugu caansan waxay la mid yihiin kuwa lagu arko dadka waaweyn, oo ay ku jiraan xanuunka goobta la duray, daal, madax xanuun, dhaxan, murqo xanuun iyo qandho. Dhibaatooyinka soo raaca waxay u muuqdeen inay xoogaa ku badan yihiin dhalinyarada qaangaarka ah. Tusaale ahaan, 63% kaqeybgalayaasha 16 iyo wixii ka weyn ayaa soo sheegay daal, laakiin 78% ka mid ah kuwa jira 12 ilaa 15 sano jir ayaa soo sheegay daal. Qiyaastii 14% dadka 16 jir iyo wixii ka sareeya waxay soo sheegeen xumad, laakiin 24% dhalinyarada qaangaarka ah ayaa diiwaangeliyey qandho. Dhibaatooyinka soo raaca waxay ahaayeen kuwa ugu badan ka dib qiyaastii labaad sida ku dhacday dadka waaweyn. Tallaalku wuxuu kaloo sababay xasaasiyad aad u dhif ah oo xasaasiyadeed. Kuwa la kulma astaamo muhiim ah ama daba dheeraada waa inay la xiriiraan dhakhtarkooda wixii talo ah.
Badanaa waxyeellooyinka tallaalka waxay dhacaan laba bilood gudahood marka tallaalka la qaato. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka soo raaca ee dhifka ah badanaa laguma soo qaado tijaabooyinka bukaan socodka. Laakiin haddii la helo, maadaama ay aad u yaryihiin, tallaalku weli wuu ka sii badbaado badan yahay khataraha jirrada dhabta ah ee COVID.
Tallaalka coronavirus ma la siin karaa iyada oo ay weheliso tallaalada kale ee carruurnimada ama qaangaarka?
Ma jiro wax xog ah oo ku saabsan sida tallaallada ula falgalaan tallaallada kale. Waxaa jira talaal yar oo dhib keena marka laga talaalayo talaalada kale. guddiga latalinta ee CDC ayaa isku raacay in tallaalka coronavirus la bixin karo isla waqtiga la siin karo tallaalada kale. La hadal daryeel bixiyahaaga markaad jadwalka samaynayso si aad ugala hadasho waxa tallaallada kale ee lagula taliyo xilligaas. Waana muhiim in la helo qiyaasta labaad waqtiga lagu taliyey oo la ilaaliyo taxaddarrada 2 toddobaad ka dib qiyaasta labaad ee ilaalinta buuxda.
« Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato kalamiidiya
Aasiyaan Ameerikaan iyo Jasiiradaha Baasifigga ee Washington: Abuuritaanka Bulshada Dhammaan »
5 Su'aalood oo Jerry ah
Daryeelka Ka Hortagga ah - Waa maxay sababta aan u daryeelo?
5 Su'aalood oo leh Xidhiidhka Qabaa'ilka ee CHPW